Medical mumayunivhesiti muRussia chepamusoro 2016 - Top zvokurapa mumayunivhesiti
nhasi "EducationBro" Magazine gadzirira chepamusoro 2016 zvokurapa mumayunivhesiti muRussia iwe. Tinovimba ruzivo urwu kuchabatsira vadzidzi dzakawanda kusarudza zvakanaka nezvechisarudzo kudzidza mushonga muRussia. MBBS makosi Russian Federation ane yepamusoro uye vakaderera muripo mari yechikoro.
Isu chinotsvaka ichi nzira nokuda chepamusoro (muna achiburuka pachidanho kukosha):
Reviews vadzidzi vatorwa pamusoro yunivhesiti
Kuwanda vadzidzi vatorwa kuyunivhesiti
Modern kuyunivhesiti musha uye midziyo
Guta uko yunivhesiti iri
Kuwanikwa Website uye magariro mapeji. Kakawanda pakati inogadziridza vavo.
Hechino nhamba 8 mu mushonga mumayunivhesiti chepamusoro muRussia 2016. Ndizvo Rostov State Medical University. Zviri mukurumbira chaizvo pakati vadzidzi vokune dzimwe nyika. It achinyatsochida pazvikoro ano uye Website uye network ayo Profiles vari chikare. A dzidzo yakanaka haagoni kufukidza zvose. University vanofanira kushandira mufananidzo wayo. Kunyange zvakadaro, ichi chinhu chakanakisisa nzvimbo kudzidza medicinу muRussia kana kunyange Europe.
No kusava nechokwadi, Krasnoyarsk State Medical University mumwe yakanakisisa kuyunivhesiti kuSiberia (Mudunhu Russian Federation). It ane matambudziko chete sechipiriso #7 kwedu zvokurapa chepamusoro. Tinogona kutaura, kuti ichi mumayunivhesiti ane ane zvakafanana chinzvimbo chepamusoro yedu. Asi mumwe munhu kuva yepamusoro. Isu kusarudza kuti KrasSMU zviri nane. Inorega tarisa ichi gore rinouya.
Volgograd State Medical University rinenge kufanana RSMU (#8) uye uye KrasnSMU (#7). mumayunivhesiti ava anenge chete. Kunyange vadzidzi pamafungiro similiar chaizvo. saka, unogona kusarudza betweent mumayunivhesiti izvi, kufunga somuenzaniso, pamusoro jogirafi kana okunze.
A yakawanda wokuRussia vezvokurapa mumayunivhesiti rakamiswa kuSiberia. Chinetso ndechokuti vadzidzi vokune dzimwe haakudi Siberian okunze. Asi vose mumayunivhesiti ava inotonhorera. saka, Novosibirsk State Medical University tora #5 chinzvimbo yedu pamusoro zvokurapa mumayunivhesiti muRussia 2016.
Siberian State Medical University ane chete hwaivapo dzidzo sezvo yapfuura mumayunivhesiti. Asi ane mamwe morden pazvikoro uye midziyo. Website zvakare nani. vadzidzi Foreign anoda yunivhesiti iyi, asi vamwe vavo havana kufanana okunze panguva Siberia. Saka sarudzo yako. zvakadaro hazvo, Siberian State Medical University ari zvakanakisisa mumayunivhesiti kuRussia uye #4 muna EducationBro chepamusoro zvokurapa mumayunivhesiti mune Russia 2016.
Saint Petersburg kunowanzoda sezvo Cultural guta guru Russian Federation. Uye guta rino ane hombe nhamba mumayunivhesiti zvikuru. Pavlov First Saint Petersburg State Medical University mumwe mumayunivhesiti izvi. vadzidzi Foreign anodzida. It ane midziyo ano uye rakamiswa ari guta rakanaka guru nhamba kunonakidza nzvimbo. Quality dzidzo zvakare zvakakwirira. SPSMU choice chakanaka.
2. The Russian National Research Medical University
Zvinenge wokutanga. A zvishoma hakuna kukwana kuhwina. Asi chero nzvimbo chepamusoro yedu – ichi chinhu rakaisvonaka mugumisiro. inosangana The Russian National Research Medical University #2 vari chepamusoro yakanakisisa vezvokurapa mumayunivhesiti muRussia. vadzidzi Foreign anodzida. It riri muMoscow, guta guru Russian Federation. Haumbofi kunzwa anofinha muguta rino. RNRMU ndiyo nzvimbo yakanakisisa kudzidza mushonga muRussia.
Heino yakanakisisa yunivhesiti zvokurapa muRussia. Ndiyo nzvimbo yakanakisisa yokudzidza MBBS kana vamwe Russian Federation. Zviri imwe chakanakisisa munyika. Ndizvo First Moscow State Medical University. Zviri pamusana “EducationBro chepamusoro zvokurapa mumayunivhesiti mune Russia 2016”. MSMU anotora #1.